Ururka Samafalka Ubax Faundation oo Raashin u qeybiyay Arday wax kabarata Dugsiyadda Qur’aanka + Sawirro – Qoraasare Media
Ururka Samafalka iyo Gargaarka ee ubax Faundation oo Fadhigiisu yahay Dalka Sweden Gaar ahaana magaaladda Labaad ee Dalkaasi ee Gothenpeuge ayaa waxaa uu dhawaan u Qeeybiyaya Raashin Gargaar ah Arday wax ka barata Dugsiyadda Qur,aanka kariimka ah eek u yaalla magaaladda Muqdisho, kuwaasi oo uu Ururkaasi gacaanta ku haayo.
Dugsiyadaan oo ay dhiogtaan araday gaareysa 270 arday oo iskugu jira Agoon,kuwo Danyar ah iyo kuwo aan waxba dhaamin ayaawaxaa ju Ururka samafalka iyo Gargaaraka ee ubax Faudation waxaa uu ka saacidaa dhinaca waxbarashadda waxaana ay ardaydaasi wax loogu baraa si kaalmo ah iyadoo aananawax dakhli ah laga Qaadin dhinaca waxbarashadoodda.
Dugsiyadaan oo ay waxka bartaan ardaydaasi ayaa waxaa macalinmiin ka ah Macalin xasan Gacal iyo Macalin Xuseden, waxaana dugsiyadaan lagu kala magacaabaa Dugsiga waxbarashadda Qur,aanka Kariimka iyo xifdinta ee Cumar Bin khadaab iyo Dugsiga waxbarashadda Qur,aanka Kariimka ah ee Imaamu shaafici,
Dugsiyadaan ayaa waxaa ururku gaarsiiyaya Raashin gargaar ah oo iskugu jiray Bariis,Bur iyo Saliid waxaana Qosykasta oo helay Raashin ku filan maalmo si ay ugu dhisaan Noloshoodda.
Dugsiyadaan ayaa waxaa ay yiahiin kuwo uu maamul ahaan gacanta ku haayo Ururka samafalka iyo Gargaarka ee Ubax waxaana uu ka saacoidaa dhiaca dhaqaalaha iyo welaiba wixii kale ee loo baahddo sida Baahiyaha kale ee Daruuriga ah.
Ardaydaan wax kabarata Dugsiyadaan oo iskugu jira Gabdho iyo Wiilal iontoodda badan ah kuwo agoon ah iyo kuwo dan yar ah ayaa waxaa halkaasi lagu baraa culunta diiniga ah eek ala duwan waxana ay hatan marayaan sanadkii labaad iyo kii woowaad oo ay socoto waxbarashadoodda ,kuwaasi oo ay haatan meel fiican ka marayaa dhionaca waxbarashadda diiniga ah.
Ururka Samafalka iyo gargaarka ee Ubax faodation ayaanan ku koobneynin oo kaliya dhinaca taakuleynta dugsiyadda balse waxaa kale oo uu wabvbadan haatan ka ciyaaraa gargaarka dadka ay abaaraha iyo macluusha saameeyeen iyadoo haatan uu kuguda jiro qeeybin raashin gargaar ah iyo Biyo dhaamin uu ka sameeyaya Goboladda dalka Gaar ahaan muqdisho iyo nawaaxigedda.
Al-Shabaab oo Shaqaale u shaqeynaayay Hay’adda WHO ka Afduubtay Gobolka Gedo